Tontolo an-dranomasina : 25 taona niaraha-niasa ny COI sy ny UE | NewsMada
Tontolo an-dranomasina : 25 taona niaraha-niasa ny COI sy ny UE
Mankalaza ny faha-25 taona nisian’ny fiaraha-miasa izao ny COI sy ny Vondrona Eoropeanina (UE) momba ny fifanarahana fikajiana ny zavaboahary anaty ranomasina. Aty amin’ny faritra ranomasimbe Indianina, toy ny eto Madagasikara, teboka iray lehibe ny fikajiana ny biolojia sy ny zavaboary amin’ny ankapobeny. Koa tsy ataon’ny COI ambanin-javatra izany, araka ny nambaran’ireo mpikambana.
Anatin’ny fandaharanasa ny fikajina ny fitantanana ny zavaboary anaty ranomasina sy eny amorontsiraka ho tombontsoan’ny firenena enina (Kaomoro, Kenya, Maurice, Seychelles, Tanzania, ary Madagasikara). Ny azo ambara eto amintsika, ohatra, ny famelomana indray ny ala honko any amin’ny morontsiraka andrefana. Misy ny lalàna narafitra ho fikajiana izany ny zavaboahary hafa. 2,4 tapitrisa euros ny tetibola naroson’ny Vondrona eoropeanina ho an’ny fikambanana isan-tsokajiny miisa 29, hanohizana ny fandaharanasa mahakasika izany, hampihena ny fahantrana.
Mampidi-bola maro ny fikajiana ireo zavaboahary ireo fa tsy fatiantoka ho an’ny toekarena akory, araka ny fanamarihan’ny COI. Tsy vitsy ireo mitombo ny fidiram-bolany noho ny fahaiza-mikajy sy mitantana : betsaka ny drakaka amin’izay faritra feno ala honko eto Madagasikara sy ireo vokatra hafa hita any amin’ireo firenena mpikambana ao amin’ny COI. Nampahafantarina, amin’izao faha-25 taona izao koa ny tatitra, natao ny faran’ny taona 2017, mahakasika ny sehatra maro, ohatra, ny « récifs coralliens » any Nosy Be.